Indlela yokuKhula i-Orange Potassium i-Dichromate Crystals
Ukuba ufunde i-crystals eyisiseko, zama ukukhula i-potassium ye-potassium yedichromate crystal. Ngokuqhelekileyo kufuneka usebenzise umbala wokutya ukuze ufumane i-crystal ye-orange, kodwa umbala we-crystal ungokwemvelo.
Iiyure ze-cristal imbewu, iiveki ze-crystal enye
Dissolve potassium dichromate njengokuba unako kumanzi afudumeleyo.
Hlaziya isisombululo, uyigubungele, kwaye uvumele ukuba uhlale ungaphazanyiswa iiyure eziliqela okanye ude ukhula luya kugcinwa. Ngaphandle koko, unokuvelisa i-crystal yembewu ngokukhupha amaconsi ambalwa kwesi sixazululo kwisitya esingenanto.
Unako ukukhulisa ubuninzi bekristal ngokuvumela ukuba isisombululo siphume, kodwa i-crystal enkulu, isisombululo kwisitya esihlambulukileyo nanini na ukubona ukukhula ngaphandle kwe-crystal (s) yakho yembewu.
Ungakwazi ukulawula ukukhula kwekristal ngokutshintsha ukushisa kwesisombululo okanye ngokulawula izinga lokukhuphuka kwamanzi ngohlobo lofakelo olufakelwe kwisitya (umz., Ikhowudi yekhofi ifumane umoya okhululekileyo, ukutywinwa isitsha kunye neplastiki ayifuni) .
Amakristal azalisekileyo aya kubakho iiprism ezikhanyayo zeerandi.
Indlela yokujika amanzi kwiwayini okanye ngegazi
I-Capricorn ye-Teen-Zodiac Signs
Ubhaptizo kuMoya oyiNgcwele
Yiyiphi iGolfers eSebenze njengeNkwenkwezi zeNkokheli kwiMasters?
Escuchad el son triunfal ('Hark, The Herald Angels Sing' ngesiSpeyin)
Iintlobo zeehhashi kunye neMigomo
Ndingazi njani ukuba i-My Idea I-Patentable?
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yaseBadajoz
Yintoni Edala I-Tsunami Yehlabathi?
'Ukuhamba ngokukhawuleza' kwiGrafu Shafts
I-Plasmodesmata: Ibhuloho eya kwindawo ethile
I-11 yeBakala iMathematika: iKharityhulam yeKharityhulam kunye neNkalo